ပရိုမိုးရှငျး Aye Thar Yar Golf Resort
သိပီးပီလား? တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ Aye Thar Yar Golf Resort မှာ B&F Weekly Promotions နဲ့ Discount တွေရယူပြီး တည်းခိုနိုင်ပီဆိုတာ…..
မိုးရာသီအစဦးလေးမို့လို့ အိမ်ထဲမှာပဲ ကွေးနေရတာပျင်းနေပြီလား? မြို့ပြရဲ့ဆူညံ့မူတွေ ကနေရုန်းထွက်ပြီးတော့ စိမ်းလမ်းစိုပြေတဲ့ သဘာဝတောတောင်ရေမြေရူးခင်းများနဲ့ အမြဲလှပနေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်းပိုင်းက တောင်ကြီးမြို့ရှိ Aye Thar Yar Golf Resort မှာသွားရောက် အပန်းဖြေကြရင်ရော ပိုမကောင်းဘူးလား?
Aye Thar Yar Golf Resort ဟာဆိုရင် ရင်သပ်ရူမောဖွယ်ကောင်းလွန်းလှတဲ့ အလှပတွေဝန်းရံနေတဲ့ အပြင် တောင်တန်းတွေကို မျက်စိတစ်ဆုံးမမြင်နိုင်လောက်အောင် ကျယ်ဝန်းလှတဲ့ နေရာမှာ ဘန်ဂလို ပုံစံအခန်းများ သီးသန့်တည်ရှိနေပြီး အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ ကောင်းကောင်း Relax လုပ်လို့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပါ…
ဘန်ဂလိုအခန်းပုံစံများဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးမှာ အေးချမ်းစွာ အနားယူနေသလိုမျိုး၊ Golf Club နဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့ အတွက် ဂေါ်က်ရိုက်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပို အဆင်ပြေတာ ပေါ့…
Hiking လုပ်ချင်တာလား? Karoke ဆိုချင်တာလား…? Bar ထိုင်ချင်လား? အစုံလင်ရှိတော့ ပျော်ရွှင်စရာတွေ အမှတ်တရတွေ ပိုဖန်တီးနိုင်တာပေါ့.. အပြင်မထွက်ချင်ဘူး ဘန်ဂလိုမှာနေချင် တဲ့သူတွေအတွက်တော့ Free Wi-Fi လေးနဲ့ကွက်တိပဲ…
ကဲ တွေဝေမနေနဲ့တော့ B&F Weekly Promotions နဲ့ဆို Discount ပါထပ်ရမယ်ဆိုတော့ အခုပဲ တောင်ကြီးမှာ အေးအေးဆေးဆေးအပန်းဖြေဖို့အတွက် Aye Thar Yar Golf Resort မှာသွားရောက် တည်းခိုပြီး ပျော်ရွှင်မူတွေ ဖန်တီးကြမယ်….
Promotions လေးတွေပေးထားတဲ့ အခန်းလေးတွေကတော့
Deluxe A (Including Breakfast)
(Original Price 70,000 MMK – B&F Price 45,000 MMK)
Deluxe B (Including Breakfast)
(Original Price 80,000 MMK - B&F Price 55,000 MMK)
Junior Suit (Including Breakfast)
(Original Price 90,000 MMK – B&F Price 60,000 MMK)
အဝတ်စားတွေမလျှော်ချင်ဘူးလား? Laundry Service/ Iron Service ကလည်းရှိသေးတယ်
ဒီလို Facilities အပြည်စုံနဲ့ တောင်ကြီးမြို့မတက်ခင် တောင်ခြေအနီးမှာရှိတဲ့ အေးသာယာမြို့လေးက နေပြီးတော့ သင့်ကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မူတွေနဲ့ စောင်ကြိုနေပါပီ..
Aye Thar Yar Golf Resort Address
-Pyi Htaung Su Road, Aye Thar Yar, Taunggyi, Southern Shan State, Taunggyi, Myanmar
Yangon Office Phone – 01 8603204,01 8603205, 018603206, 018603327
Aye Thar Yar Golf Resort ရဲ့ Promotions ကြီးကိုရယူလိုတယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions Mobile App ရဲ့ Aye Thar Yar Golf Resort စာမျက်နှာက Use Now ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Success စာမျက်နှာကို Walk In ပြပြီးတော့ Promotion ကိုရယူနိုင်ပါတယ်..
Mobile App အသုံးပြုတ နဲ့ပက်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Promotion ရယူချင်တဲ့ သတင်းအချက်လက်များကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ 09-969910128, 09-969910115 တို့ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Aye Thar Yar Golf Resort ဆိုငျ
Aye Thar Yar Golf Resort Address - Pyi Htaung Su Road, Aye Thar Yar, Taunggyi, Southern Shan State, Taunggyi, Myanmar
ဖုနျးနံပါတျ : 01 8603204/05/06, 01 8603327